फेसबूक र ट्वीटरले किन गरे ट्रम्पमाथि ‘कारबाही’ ? - Sacho Post
२०७७ श्रावण २३, शुक्रबार ०८:२२ बजे
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प तथा उनको प्रचार अभियानले प्रेषित गरेका कोरोना भाइरससम्बन्धी सामग्रीमाथि फेसबूक र ट्विटरले ‘कारबाही’ गरेका छन् ।
तिनमा ट्रम्पले बालबालिकामा कोरोना भाइरसलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता भएको दाबी गरेका थिए । ट्रम्पले फक्स न्यूजलाई दिएको र फेसबुकमा प्रेषित एउटा अन्तर्वार्ताको अंशमा कोभिडसम्बन्धी ‘हानिकारक मिथ्या सूचना’ भएको भन्दै फेसबुकले मेटिदिएको छ ।
ट्विटरले पनि सोही अंश भएको ट्वीट नमेटेसम्मका लागि ट्रम्पको प्रचार अभियानको खाता निलम्बन गरिदिएको थियो । अमेरिकी सरकारी निकायले दिएको जनस्वास्थसम्बन्धी सूचनामा बालबालिकामा कोभिड-१९ को प्रतिरोध गर्ने क्षमता नहुने उल्लेख छ ।
ट्रम्पले के भनेका थिए ?
कोरोना भाइरस र हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइनबारे मिथ्या सूचनालाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै गत महिना ट्विटरले ट्रम्पका छोराको खाता निलम्बन गरिदिएको थियो । फक्स टीभीको एउटा कार्यक्रममा बुधवार बिहान टेलिफोनबाट बोल्दै ट्रम्पले देशभरि विद्यालय खोल्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
‘यदि बालबालिकालाई हेर्ने हो भने बालबालिकाहरू लगभग – अनि म भन्छु निश्चित रूपमा – यो रोगविरुद्ध लगभग प्रतिरोधी छन् ।’ बालबालिकाको प्रतिरक्षा प्रणाली अरूको भन्दा बलियो भएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘अनि उनीहरूलाई कुनै समस्या छैन, उनीहरूलाई समस्या छँदैछैन ।’
नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार बन्न लागेका ट्रम्पले कोरोना भाइरसबारे टिप्पणी गर्दै भने, ‘यो कुरो हराउनेछ । यो हराउने कुराहरूजस्तै हराउनेछ ।’
फेसबुक र ट्विटरले के भने ?
‘यो भिडिओमा एउटा समूहका मानिसहरू कोभिड-१९ प्रतिरोधी छन् भनेर गरिएको मिथ्या दाबी समाविष्ट छ जुन कोभिडसम्बन्धी हानिकारक मिथ्या सूचनाबारे हाम्रो नीतिहरूको उल्लङ्घन हो,’ फेसबुकका एक प्रवक्ताले बुधवार भने ।
कोभिडसम्बन्धी नीति प्रयोग गरेर फेसबुकले ट्रम्पले प्रेषित गरेको सामग्री पहिलो पटक हटाइदिएको हो । तर उनको पेजमा प्रकाशित सामग्रीलाई फेसबुकले पहिला पनि कारबाही गर्ने गरेको थियो । सोही अन्तर्वार्ताको अंश भएको सामग्री प्रेषित गरेपछि बुधवार नै ट्विटरले @TeamTrump को नाममा भएको खाता निलम्बित गरिदियो ।
ट्विटरका एक प्रवक्ताका अनुसार उक्त ट्वीटले ट्विटरको कोभिड-१९ सम्बन्धी मिथ्या सूचनाबारे विद्यमान नीति उल्लङ्घन गरेको थियो । ट्विटरका अनुसार उक्त खाताबाट फेरि अर्को ट्वीट गर्नुअघि खातावालले त्यो ट्वीट मेट्नुपर्ने जनाएको थियो । पछि उक्त ट्वीट मेटिएको पाइयो । बीबीसी